1 afọ 1 ọnwa gara aga #1104 by alogie
Naanị chọrọ ịme onwe m. Aha m Alistair na m bi na Northern California. M na-adịghachi anya na simming na zụrụ P3Dv4. E nwere ton nke freeware n'ebe ahụ, ma ndakọrịta na v4 nwere ike isi ike ịchọpụta ụfọdụ saịtị. Ọ na-amasị m n'eziokwu ahụ na nbudata Rikoooo sitere na ya ka m wee ghara ichegbu onwe gị banyere imebi mmetụta, nlele ma ọ bụ nchekwa nchekwa dị iche iche. Ike iwepụ ọcha bụ ego. Ndebanye aha jumbo bụ ihe na-enweghị atụ.
Enwere m mmasị n'ụgbọelu ụgbọelu na-agba ọsọ na obere ụgbọ na ụgbọelu. Ebe m na-abanye n'ụgbọelu azụmahịa anaghị arụ ọrụ nke ọma, ya mere ọ dị m mkpa ime ihe.
Enwere m mmasị nmikpu ka m wee gbakwụnye:
na maka ihe mara mma:
Mepee LC Europe, NA na SA
Obodo Scotland, England na NorCal si ORBX.
Enwere m mgbatị siri ike nke dabeere na isi I5-2500k quad core. Ebe ọ bụ na m zụtara ya, akwụgoola m RAM ahụ na 16GB, tinye SSD maka OS na SSD raara onwe ya nye maka egwuregwu, ma gbakwunye kaadi GTX 1050 Ti. Ọ na-eme nke ọma na 1680 X XUMUM nyochaa m ochie.
Maka ebumnuche simulation m nwere TrackIR 5 na Couver HOT (un-modded ọ gwụla ma ọ bụrụ na a na-agbanye mmiri na-agbapụta) na pedal TMaster.
Oge ike page: 0.199 sekọnd